Mpitsabo Avy Ao Gaza Miezaka Hanarina Ilay Hany Sekoly Ho An’ny Ankizy Sembana Ao Amin’ny Faritra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Marsa 2015 3:35 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, বাংলা, Aymara, English
Mari-pamantarana ny ‘Vondrompiarahamonin'ireo Olona Tratry ny Fahasembanana Ara-Batana’ , hita eo amin'ny sisa tavela tamin'ilay sekoly. Sary an'ny ‘Tetikasa Vonjeo i Gaza‘
Fanentanana iray ao amin'ny IndieGogo no miezaka manangona vola ho fanarenana ilay hany sekoly natao ho an'ny ankizy sembana ao Gaza, izay rava nandritra ilay nantsoin'ny Israeliana ho “Hetsika Fiarovana n y Sisintany” tamin'ny lohataona lasa. Ny Tetikasa Vonjeo i Gaga dia ry Dr. Basel Abu Warda, mpitsabo ao amin'ny Al Shifa, toeram-pitsaboana lehibe indrindra ao Gaza, sy Mostafa Asi, mpikatroka mpiaro zon'olombelona, miaraka amin'ny tanjona hoe hanangonana 35.000 dolara hatramin'ny 10 Aprily. Amin'ny fotoana anoratana ity dia ny 91 isanjato amin'ny tanjon'ilay fanangonam-bola no efa tratra, nahazoana 31.768 dolara avy aminà malala-tànana 500.
Tamin'ny fampiasàna ny tenifototra #GazaWheelChairs (SezaMisyKodiaranaGaza) noazavain'i Dr. Abuwarda ny fomba hidonan'ireny fandraisana anjara ireny any amin'ireo ankizy ao an-tsekoly :
#Gazawheelchairs Azafady mba jereo, manomeza ary zaraony bitsika https://t.co/PFXWpx3ZUs
Ilay fanentanana dia niarahana niasa tamin'ny Vondrompiarahamonin'ireo Olona Tratry ny Fahasembanana Ara-Batana, fikambanana tsy miankina iray miasa ao Gaza efa hatramin'ny 1992, tantanan'ny andianà tanora sembana ara-batana mahatsapa tena fotsiny izao. Araka ny fanazavan-dry zareo azy ao amin'ny pejin'ny IndieGogo, io Vondrompiarahamonina io no “fikambanana tsy miankina voalohany indrindra tao amin'ny Lemak'i Gza nanomen fahafahna iro tanora sembana hampiasa ny zony sy hitantana ny fikambanany.” Tohizany hoe:
“Ny Vondrompiarahamonin'ireo Olona Tratry ny Fahasembanana Ara-Batana dia manao ho tanjona ny fandrisihana, fampaherezana ary fanomezana fahafahana ireo tratryny fahasembanana ara-batana amin'ny alàlan'ny fanabeazana azy ireny hampiasa ny zony, fanampiana azy ireny ho tafitra hanatratrarany ny tanjony, ary amin'ny fanohanana azy ireny amin'ny ataony hahatratrarany ny fiverenana indray araka izay tratra ho ao anatin'ny fiarahamonina.
Manome fiahiana ara-pahasalamana sy fitsaboana feno, fanabeazana ary fanofànana, fandaharanasa sosialy sy fanohanana ara-tsaina ary tolotra ho an'olona maherin'ny 11.200 koa ny Vondrompiarahamonin'ireo Olona Tratry ny Fahasembanana Ara-Batana ho an'ireo tratry ny fahasembanana tsy azo tsaboina intsony ao Gaza amin'ny alàlan'ire foibe fitsaboana sy fanabeazana manokana ao Gaza sy Rafah.”
Nandefa ity lahatsary fanentana aity ihany koa i Dr Abu Warda hanazavàna ny fomba fanohanan'ny sekoly ireo ankizy sembana miisa anjatony ao Gaza.
Indoneziana roa mpanao asa antsitrapo, Akhwat Bergerak, hetsiky ny vehivavy silamo, sy ny ACT Indonezia, fikambanana iray miahy ny maha-olona, no manohana ilay fanentanana.
Dr. Basel Abuwarda sy Mostafa Asi ao amin'ilay toerana hanorenana ny sekoly. Sary an'ny ‘Tetikasa Vonjeo i Gaza‘